Weerar Lagu Fuliyay Gaari Xamuul ah oo Xalay ka Dhacay Dalka Jarmalka (VIDEO) - Hablaha Media Network
Weerar Lagu Fuliyay Gaari Xamuul ah oo Xalay ka Dhacay Dalka Jarmalka (VIDEO)
HMN:- Dalka Jarmalka ayaa waxaa xalay ka dhacay weerar lagu fuliyay gaari nooca xamuulka, oo lagu weeraray dad ku sugnaa suuq Chrismas-ka, oo habeenkii la’isugu yimaado ku yaala Galbeedka Magaalada Berlin ee Xarunta Wadanka Jarmalka.
Booliska, ayaa sheegay in gaarigaasi la jiirsiiyay qaar kamid ah dadkii ku sugnaa suuqaasi, iyadoo oo ay boolisku xaqiijiyeen inay hayaan dhimashada sagaal qofood iyo dhaawaca aad u tiro badan oo loola cararay isbitaalada Magaaladaasi.
Ciidamada qaabilsan la dagaalanka argagixisada ee Magaalada Berlin, ayaa sidoo kale xaqiijiyay in falkaasi ay u soo qabteen nin la tuhunsan yahay in uu yahay wadihii gaarigaasi.
Warbaahinta Jarmalka, ayaa qortay in ninkaasi uu ka cararay goobtii uu falka ka gaystay, balse ay Ciidamada Boolisku ka soo qabteen meel 100 tallaabo ka baxsan goobtaasi.
Ilaa iyo hadda lama sheegin dhalashada ninkaasi iyo wadanka uu ka soo jeedo, waxana boolisku ay sheegeen inay baaritaan ku wadaan ninkaasi.